Tag: inotungamirwa nechinangwa | Martech Zone
Tag: inotungamirwa nechinangwa
Kukwira Kwechinangwa-Kunotungamirwa Yemakambani Kushambadzira
NeChishanu, Gunyana 5, 2014 Douglas Karr
Iwe unowanzo kundiwana mune dzimwe nharo huru online pane chero chinhu chine chekuita nezvematongerwo enyika, chinamato uye hupfumi ... ese mabhatani anopisa anodziviswa nevanhu vazhinji. Ndicho chikonzero nei ini ndoga uye ndakashongedzwa presence pamasocial media. Kana iwe uchida kushambadza chete, tevera iyo mhando. Kana iwe uchindida, nditevere ini ... asi chenjera ... iwe unowana zvese kwandiri. Pandinenge ndiri capitalist asina kutsamwa, iniwo ndine moyo muhombe. Ndinotenda tinofanira kubatsira mumwe
TOMS: Yenyaya Yekudzidza mune Inobatsira Chikonzero Kushambadzira
NeChishanu, Nyamavhuvhu 23, 2013 NeChishanu, Gunyana 5, 2014 Douglas Karr
Nguva pfupi yapfuura ndanga ndanyora chikumbiro kuburikidza neiyi blog kuti Mira Kuuraya Chikonzero Kushambadzira. Dambudziko raive rekukonana uye mhedzisiro isingatarisirwe nevatengi vaive nayo apo mabhizinesi aishandisa kushambadzira kwavo kuita mabhizimusi anobatsirika vachishandisa zvisina mubatsiri kana masangano anobatsira kupa shoko. Vanopokana nechikonzero chekushambadzira vanotenda kuti mabhizinesi ari kushandisa zvisirizvo… uye vanofanirwa kungopa chero mari kubva mukunaka kwemoyo yavo. Dambudziko rangu neizvozvo dzimwe nguva
Mira Kuuraya Chikonzero Kushambadzira
Svondo, Kubvumbi 7, 2013 NeChishanu, Gunyana 5, 2014 Douglas Karr
Kana mudzidzi achida mari yekudya kwemasikati yechikoro, ndeyezvishoma kana kusatomboitika kwavari kwavari kunobva mari. Vane nzara chete uye vanoda mari. Hazvisi zvekudya zvechikoro chete, zvipo zvevadzidzi uye kudzidza, zvinhu zvekurapa, kudzidzisa, kuchengetedza zuva, uye nezvimwe zvakawanda. Iyo rondedzero yezvinodiwa haina muganho uye, mune yakaderera hupfumi, inoramba ichikura. Mipiro yeVateveri Pakaitika kudengenyeka kwenyika muHaiti, Internet yaive ichirira